Minoa an'Andriamanitra | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Ny finoana an'Andriamanitra dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, miorim-paka ao amin'ny Zanany tonga nofo ary nohazavaina tamin'ny teniny mandrakizay tamin'ny alàlan'ny fijoroana ho vavolon'ny Fanahy Masina ao amin'ny Soratra Masina. Ny finoana an 'Andriamanitra dia mahatonga ny fon'ny olona sy ny sainy hanaiky ny fanomezana fahasoavana, famonjena. Amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy sy ny Fanahy Masina, ny finoana dia ahafahantsika mifandray amin'ny ara-panahy sy mahatoky amin'Andriamanitra Raintsika. I Jesoa Kristy no mpanoratra sy mpanefy ny finoantsika, ary amin'ny alàlan'ny finoana fa tsy ny asa no ahazoantsika famonjena amin'ny fahasoavana. (Efesiana 2,8: 15,9; Asan'ny Apostoly 14,27: 12,3; 1,1.4:3,16; Romana 10,17: 11,1; Jaona 5,1: 2, 1,17; Asa. 3,21:28; Romana 11,6:3,12; Heb. 1: 2,5; Romana 12,2; ;;; Efesiana; Korintiana; Hebrio)
Mamaly an'Andriamanitra amin'ny finoana
Andriamanitra lehibe ka tsara. Mampiasa ny heriny mahery Andriamanitra hampandrosoana ny fampanantenany fitiavana sy famindram-po amin'ny vahoakany. Malemy fanahy, be fitiavana izy, tsy mora tezitra, ary be fahasoavana.
Tsara izany, saingy ahoana no ifandraisan'izy io aminay? Inona no fahasamihafana ao aminy eo amin'ny fiainantsika? Ahoana no fandraisantsika ny Andriamanitra mahery sy malemy fanahy? Fomba roa, fara fahakeliny, ny fihetsikay.
Raha tsapantsika fa manana ny hery rehetra Andriamanitra hanao ny sitrapony ary mampiasa izany hery izany mandrakariva Izy hitahy ny olombelona, ​​afaka mahazo matoky tanteraka isika fa eo am-pelatanana. Manana ny fahaizana sy ny tanjona voalaza izy hiasa amin'ny famonjena antsika ny zava-drehetra, anisan'izany ny fikomiana, ny fankahalantsika ary ny famadibadantsika azy sy ny tsirairay. Mahatoky tanteraka izy - mendrika hatokisanay.
Rehefa ao anatin'ny fitsapana, ny aretina, ny mijaly ary ny fahafatesany aza isika dia afaka matoky fa mbola momba antsika Andriamanitra, ka miahy antsika izy ary eo ambany fifehezana ny zavatra rehetra. Mety tsy hoatrany izany, ary mety mahatsiaro tena hifehy isika, saingy afaka matoky isika fa tsy ho taitra avy amin'Andriamanitra. Azony atao ny mamadika ny toe-javatra rehetra, ny tsy fahampiana tsirairay hahasoa ny tenantsika manokana.
Tsy tokony hisalasala momba ny fitiavan'Andriamanitra antsika isika. «Fa nasehon’Andriamanitra ny fitiavany antsika satria maty ho antsika i Kristy fony mbola mpanota isika» (Romana 5,8). "Izao no fomba nahafantarantsika ny fitiavana izay nanoloran'i Jesosy ny ainy hamonjy antsika" (1 Jaona 3,16). Afaka miantehitra amin’Andriamanitra izay tsy niaro ny zanany lahy hanome antsika izay rehetra ilaintsika mba hahazoana fahasambarana mandrakizay amin'ny alàlan'ny zanany lahy.
Tsy nandefa olon-kafa Andriamanitra: ny Zanak'Andriamanitra, izay ilaina amin'ny maha-Andriamanitra, tonga olombelona, ​​ka mety ho faty ho antsika izy ary hitsangana amin'ny maty (Hebreo 2,14). Tsy ran'ny biby isika, tsy amin'ny ran'ny olona tsara, fa tamin'ny ran'olombelona izay tonga olombelona. Isaky ny mandray ny fanasan'ny Tompo isika dia ampahatsiahivina ny halehiben'ny fitiavany antsika. Afaka matoky isika fa tia antsika izy. izy
dia mahazo ny fitokisanay.
"Mahatoky Andriamanitra", hoy i Paul, "izay tsy mamela anao hizaha toetra ny herinao fa mamela ny fakam-panahy mba haharetanao" (1 Korintiana 10,13). «Fa mahatoky ny Tompo; Izy io dia hanatanjaka sy hiaro anao tsy hanao ratsy » (2 Tesaloniana 3,3). Na "tsy mahatoky aza isika, dia mahatoky hatrany" (2 Timoty 2,13). Tsy hanova ny sainy Izy fa mila antsika, miantso antsika, manao soa amintsika. "Aoka isika hihazona ny fibabohana fanantenana ary tsy hiahanahana; satria mahatoky izy izay nampanantena azy » (Hebreo 10,23).
Manana fanoloran-tena ho antsika Izy, fanekena hanavotra antsika, hanome antsika fiainana mandrakizay, ho tia antsika mandrakizay. Tsy tiany ny tsy miaraka amintsika. Azo itokisana izy, saingy ahoana no tokony hataontsika? Miahy ve isika? Miady mafy ve isika mba ho mendrika ny fitiavany? Sa isika matoky azy?
Tsy tokony hisalasala momba ny herin'Andriamanitra mihitsy isika. Hita izany amin'ny fitsanganan'i Jesôsy amin'ny maty. Izany ilay Andriamanitra manana fahefana amin'ny fahafatesana ihany, fahefana amin'ny zavatra rehetra noforoniny, fahefana amin'ny fahefana hafa rehetra (Kolosiana 2,15). Nandresy ny zava-drehetra tamin'ny alàlan'ny hazo fijaliana Izy, ary izany dia porofoina amin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Tsy nahafehy azy ny fahafatesana satria izy no andrian'ny fiainana (Asan’ny Apostoly 3,15).
Ny hery izay natsangan'i Jesôsy tamin'ny maty dia hanome fiainana tsy mety maty koa (Romana 8,11). Afaka matoky isika fa manana ny hery sy ny faniriany hanatanteraka ny fampanantenany rehetra ho antsika. Azontsika itokisana azy amin'ny zavatra rehetra - ary tsara izany satria hadalana ny matoky ny zavatra hafa rehetra.
Hahomby amin'ny tenantsika ihany isika. Ny tenany aza, na dia ny masoandro aza tsy hahomby. Ny hany fanantenana dia ao amin'Andriamanitra manana hery lehibe noho ny masoandro, hery lehibe noho izao tontolo izao, izay mahatoky kokoa noho ny fotoana sy ny fotoana, feno fitiavana sy fahatokiana antsika. Manana izany fanantenana azo antoka izany amin'i Jesosy, Mpamonjy antsika.
Finoana sy fahatokisana
Izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy dia hovonjena (Asan’ny Apostoly 16,31). Fa inona ny dikan'ny hoe mino an'i Jesoa Kristy? Na i satana aza mino fa i Jesoa no Kristy, Zanak'Andriamanitra. Tsy tiany io fa fantany fa marina izany. Ankoatr'izay dia fantatr'i Satana fa misy Andriamanitra ary mamaly soa izay mitady azy (Hebreo 11,6).
Ka inona izany no mahasamihafa ny zavatra inoantsika sy ny finoan’i Satana? Maro amintsika no mahalala valiny avy amin'i James: Ny finoana marina dia mampiseho amin'ny alàlan'ny hetsika (Jakoba 2,18-19). Ny zavatra ataontsika dia mampiseho izay tena inoantsika. Ny fihetsika dia mety ho porofon'ny finoana, na dia misy aza ny olona mankato noho ny antony tsy izy. Na i Satana aza miasa ao ambanin'ny fetra napetrak'Andriamanitra.
Ka inona ary ny finoana ary inona no maha samihafa azy amin'ny "mitazona" marina? Mieritreritra aho fa ny fanazavana tsotra indrindra dia ny hoe famonjena ny finoana. Matoky an'Andriamanitra izahay ka hikarakara antsika, hanome antsika tsara fa tsy ratsy, hanome antsika fiainana mandrakizay. Ny fahatokisana dia midika hoe mahalala fa misy Andriamanitra, fa tsara izy, ka manana hery hanao izay tiany, ary matoky fa hampiasa izany hery izany Izy mba hanao izay tsara indrindra ho antsika. Ny fahatokisana dia midika fa fahavoazantsika hanaiky izany ary vonona ny hanaraka azy - tsy noho ny tahotra fa avy amin'ny fitiavana. Raha matoky an'Andriamanitra isika, dia tia azy.
Ny fahatokisana dia mampiseho izay ataontsika. Fa ny tsy fiatoana dia tsy atokisana ary tsy miteraka fahatokisana - vokatry ny fahatokisana fotsiny izany. Ny tena finoana dia ny finoana an'i Jesosy Kristy.
Fanomezana avy amin'Andriamanitra
Avy aiza io karazana fahatokisana io? Tsy zavatra azontsika ivoahana avy aminy. Tsy afaka miresaka momba ny tenantsika isika na mampiasa lozika olombelona hanamboarana tranga mampitolagaga sy mafy orina. Tsy hanana fotoana hiatrehana ny fanoherana rehetra azo atao isika, ny hevitra rehetra momba ny filozofia momba an'Andriamanitra. Isika anefa dia voatery handray fanapahan-kevitra isan'andro: hatoky an'Andriamanitra ve sa tsia? Ny fanandramana ny hametraka ny fanapahan-kevitra amin'ny burn burn dia fanapahan-kevitra samirery - tsy mbola matoky azy akory isika.
Ny kristiana tsirairay dia nandray fanapahan-kevitra tamin’ny fotoana iray na fotoana iray mba hatoky an’i Kristy. Ho an'ny sasany, fanapahan-kevitra noraisina tsara izany. Ho an'ny sasany dia fanapahan-kevitra tsy mitombina izany noho ny antony tsy izy - fa izany no tena fanapahan-kevitra tsara. Tsy afaka natoky ny olon-kafa izahay, na dia ny tenanay aza. Ny tenanay no hanoratsika ny ainay. Tsy afaka ny hatoky ny manam-pahefana hafa koa izahay. Ho an'ny sasany amintsika, ny finoana dia safidy nalainay tamin'ny famoizam-po - tsy afaka mandeha amin'ny toerana hafa afa-tsy amin'i Kristy (Jaona 6,68).
Ara-dalàna raha tsy mino an'izany ny finoana voalohany, toerana tsara hanombohana fa tsy toerana tsara hijanona. Mila mitombo amin'ny finoantsika isika. Araka ny nolazain'ny lehilahy iray tamin'i Jesosy:
"Heveriko fa; ampio ny tsy finoako! » (Marka 9,24). Ny mpianatra mihitsy aza dia nisalasala, na dia taorian'ny niankohofany tamin'ilay nitsangana tamin'ny maty aza (Matio 28,17).
Ka aiza no niavian'ny finoana? Fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny Efesiana 2,8 dia milaza amintsika fa ny famonjena dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, izay midika fa ny finoana mitondra mankany amin'ny famonjena dia tsy maintsy ho fanomezana ihany koa.
Milaza amintsika ao amin'ny Asan’ny Apostoly 15,9 fa nanadio ny fon'ny mpino Andriamanitra tamin'ny finoana. Niasa tao anatiny Andriamanitra. Izy no nanokatra "ny varavaran'ny finoana" (Asan’ny Apostoly 14,27). Nahavita izany Andriamanitra satria izy no ahafahantsika mino.
Tsy hatoky an’Andriamanitra isika raha tsy nomeny fahafahana hahatoky azy. Ny fahotana dia nanimba ny olona hino na hatoky an'Andriamanitra amin'ny heriny na fahendreny. Izany no antony tsy finoana "asa" izay mahafeno antsika ho famonjena. Tsy hahatratra laza isika satria mahafeno fepetra - ny finoana dia midika fotsiny hoe mandray ny fanomezana, mankasitraka ilay fanomezana. Nomen'Andriamanitra ny fahaizana mandray ilay fanomezana isika, hankafizantsika ilay fanomezana.
Misy antony tsara matoa Andriamanitra hino antsika satria misy olona mahatoky tanteraka ka mino azy sy hamonjy azy. Ny finoana omeny antsika dia miorina amin'ny zanany lahy, izay tonga nofo hamonjy antsika. Manana antony tsara manam-pinoana isika, satria manana mpamonjy iray izay nividy famonjena ho antsika. Nataony daholo izay rehetra takiana, napetrany indray ary nanao sonia, nasiana tombo-kase ary natolotra. Manana fototra mafy orina ny finoantsika: Jesosy Kristy.
Jesosy no fiandohana sy fahavitan'ny finoana (Hebreo 12,2), nefa tsy izy irery no manao ny asa. Jesosy irery no manao ny sitrapon'ny Ray ary miasa ao am-pontsika ao amin'ny Fanahy Masina izy. Mampianatra antsika ny Fanahy Masina ary mandresy lahatra antsika ary manome antsika finoana (Jaona 14,26; 15,26; 16,10).
Amin'ny alàlan'ny teny
Ahoana no fomba anomezan'Andriamanitra antsika? (Ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina) Finoana? Matetika amin'ny alàlan'ny toriteny. "Koa ny finoana dia avy amin'ny fitoriana, fa ny fitoriana kosa dia avy amin'ny Tenin'i Kristy" (Romana 10,17). Ny toriteny dia ao amin'ny teny nosoratan'Andriamanitra, ny Baiboly, ary ao anaty tenin'Andrimanitra izany, na ao anatin'ny toriteny iray ao am-piangonana na fijoroana ho vavolombelona tsotra amin'ny olona iray.
Ny tenin'ny filazantsara dia milaza amintsika ny momba an'i Jesosy, ny tenin'Andriamanitra ary ny Fanahy Masina dia mampiasa io teny io mba hanazavana antsika ary amin'ny fomba sasany dia mamela antsika hatoky an'io teny io. Indraindray izany no antsoina hoe "fijoroana ho vavolombelona momba ny Fanahy Masina", saingy tsy toy ny vavolombelona eo amin'ny fitsarana izay ahafahantsika mametraka fanontaniana.
Toy ny kofehy anatiny izay ovaina sy mamela antsika handray ny vaovao tsara torina. Toa tsara; na dia mbola manana fanontaniana aza isika, dia mino fa afaka miaina izany hafatra izany. Azontsika atao ny manorina ny fiainantsika eo, afaka mandray fanapahan-kevitra miorina amin'izany. Misy dikany izany. Io no safidy tsara indrindra azo atao. Omen'Andriamanitra hery hahatokisana azy isika. Manome antsika hampitombo ny finoana koa izany. Ny fametram-pinoana dia voa maniry. Izy io dia manome hery sy mamela ny saintsika sy ny fihetseham-pontsika hahatakatra bebe kokoa ny filazantsara. Manampy antsika izy hahatakatra bebe kokoa momba an'Andriamanitra amin'ny fanambarany ny tenany amintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Raha mampiasa sary iray amin'ny Testamenta Taloha dia manomboka miara-mandeha amin'Andriamanitra isika. Mipetraka ao aminy isika, mihevitra azy isika, mino azy isika.
Fa ny ankamaroan'ny kristiana miady amin'ny finoany indraindray. Tsy manja sy tsy miovaova matetika ny fitomboantsika - mitranga amin'ny fitsapana sy ny fanontaniana izany. Ho an'ny sasany, ny fisalasalana dia mitranga noho ny voina na ny fijaliana mafy. Ho an'ny hafa dia fahombiazana na fotoana tsara izay manandrana an-tsokosoko fahatokisana zavatra mihoatra noho Andriamanitra. Maro amintsika no hiatrika ireo fanamby roa amin'ny finoantsika.
Matetika ny olona marary dia manana finoana bebe kokoa noho ny mpanan-karena. Ny olona iharan'ny fitsapana tsy tapaka dia mahafantatra fa ankoatr'Andriamanitra dia tsy manana fanantenana izy ireo fa tsy manan-tsafidy afa-tsy ny hatoky azy. Ny antontan'isa dia mampiseho fa ny olona mahantra dia manome tombony avo lenta amin'ny vola azony noho ny an'ny manankarena. Toa izay ny finoany (na dia tsy lavorary aza) dia tsy miovaova.
Toa ny fahavalon'ny finoana lehibe indrindra dia rehefa mandeha tsara ny zava-drehetra. Talanjona ny olona hino fa tamin'ny herin'ny faharanitan-tsaina no nahavitan'izy ireo zavatra be dia be. Mamoy ny fiheveran-janany izy ireo hiankina amin'Andriamanitra. Miankina amin'izay ananany fa tsy Andriamanitra.
Ny olona sahirana dia ao anatin'ny toe-javatra tsaratsara kokoa hahafantarany fa ny fiainana eto amin'ity tany ity dia feno fanontaniana ary ny Andriamanitra no manontany azy kely indrindra. Matoky azy izy ireo satria ny zavatra hafa rehetra dia voaporofo fa tsy azo itokisana. Ny vola, ny fahasalamana ary ny namana - mandainga daholo izy ireo. Tsy afaka miantehitra amin'izy ireo isika.
Azonao atao ny tsy miankina afa-tsy amin'Andriamnitra, fa na izany aza dia tsy foana ny porofo tiantsika hananana. Ka tsy maintsy matoky azy isika. Araka ny nolazain'i Joba: na dia mamono ahy aza izy dia tiako hatoky azy (Joba 13,15). Izy irery ihany no manantena fiainana mandrakizay. Izy irery no manantena fa misy dikany ny fiainana na misy antony.
Ampahany amin'ny fitomboana
Na izany aza, miady amin'ny fisalasalana isika indraindray. Ampahany amin'ny dingan'ny fitomboan'ny finoana amin'ny fianarana ny fahatokiana an'Andriamanitra bebe kokoa amin'ny fiainana. Hitantsika ny safidy eo anoloany, ary anjarantsika indray no mifidy an’Andriamanitra ho vahaolana tsara indrindra.
Araka ny nolazain'i Blaise Pascal, taonjato maro lasa izay, na dia tsy mino aza isika noho ny antony hafa, dia tokony hino isika, satria Andriamanitra no filokana tsara indrindra. Raha manaraka azy isika ary tsy misy izy, dia tsy very na iray aza. Fa raha tsy manaraka azy izy ary misy izy, dia very ny zava-drehetra. Noho izany dia tsy misy na inona na inona ho very isika fa ny zava-drehetra ho azo raha mino an'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fiainana sy ny fisainana fa Izy no zavamisy azo antoka indrindra eto ambonin'ny tany.
Tsy midika akory izany hoe hahazo ny zavatra rehetra isika. Tsia, tsy ho azontsika mihitsy ny zava-drehetra. Ny mino dia ny matoky an'Andriamanitra, na dia tsy azontsika foana aza. Afaka mivavaka aminy isika na dia misy misalasala aza (Matio 28,17). Ny famonjena dia tsy fifaninanana ara-tsaina. Ny finoana manafaka antsika dia tsy avy amin'ny tohan-kevitra filozofia izay misy valiny na fisalasalana rehetra. Ny finoana dia avy amin'Andriamanitra. Raha miankina amin'ny fahalalana ny valin'ny fanontaniana tsirairay isika dia tsy miankina amin'Andriamanitra.
Ny hany antony ahafahantsika miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia amin'ny alàlan'ny fahasoavana, amin'ny alàlan'ny finoana an'i Jesoa Kristy, Mpamonjy antsika. Rehefa miantehitra amin'ny fankatoavantsika isika dia miankina amin'ny zavatra tsy mety, zavatra tsy azo ianteherana. Mila manova ny finoantsika an'i Kristy isika (Avelao Andriamanitra hanova ny finoantsika) ary ho azy irery. Ny lalàna, na ny lalàna tsara aza dia tsy azo atao fototry ny famonjena antsika. Ny fankatoavana na dia ny didin'ny fanekem-pihavanana Vaovao aza dia tsy ho loharanon'ny fiarovana antsika. Kristy irery ihany no azo atokisana.
Rehefa mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy isika dia matetika mahatsapa bebe kokoa ny fahotantsika sy ny fahotantsika. Fantatsika fa lavitra antsika Andriamanitra, ary afaka mahatonga antsika tsy hisalasala koa fa handefa ny Zanany Andriamanitra mba ho faty ho an'ny olona maloto tahaka antsika.
Ny fisalasalana, na dia lehibe aza, dia tokony hitarika antsika hiverina amin'ny finoana lehibe kokoa an'i Kristy, satria ao aminy ihany no ahafahantsika mahita azy. Tsy misy toerana hafa hahodina. Amin'ny teniny sy ny zavatra nataony, dia hitantsika fa fantany tsara ny faharatsiana antsika talohan'ny nahatongavany ho faty noho ny fahotantsika. Arakaraka ny ahitahantsika ny tenantsika no vao hitantsika fa mila manolotra ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Izy irery ihany no mahavonjy antsika aminny tenantsika, ary izy ihany no hanafaka antsika amin ny fisalasalantsika.
Amin'ny finoana isika dia manana fifandraisana mahasoa eo amin'Andriamanitra. Amin ’ny alalàn’ ny vavaka ataontsika dia mivavaka, ny finoana ny hivavahantsika, amin ’ny finoana ny faheno ny teniny ao anaty toriteny sy eo amin’ ny fiarahamonina. Ny finoana dia mamela antsika handray anjara amin'ny fifandraisana amin'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amin'ny alàlan'ny finoana no ahafahantsika maneho ny tsy fivadihantsika amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Mpamonjy antsika, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina izay miasa ao am-pontsika.
Amin’ny alalan’ny finoana hoe afaka mitia olona hafa isika. Ny finoana manafaka antsika amin'ny tahotra ny fanesoana sy ny fandavana. Afaka mitia ny hafa isika nefa tsy manahy ny hataon'izy ireo amintsika satria matoky an'i Kristy isika ka hanome valiny soa. Rehefa mino an'Andriamanitra isika dia afaka halala-tanana amin'ny hafa.
Amin'ny finoana an'Andriamanitra dia afaka mametraka Azy ho loha laharana eo amin'ny fiainantsika. Raha mino isika fa tsara Andriamanitra toy ny nolazainy, dia hanome lanja azy mihoatra ny zava-drehetra isika ary ho vonona hanao ireo sorona izay takiny amintsika. Matoky azy isika, ary amin'ny finoana dia hiaina ny fifaliana famonjena isika. Ny fiainana kristiana dia resaka fahatokisana an'Andriamanitra hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany.